Meksikana 3 Tsy Manaiky Hangina Noho Ny Tsy Rariny · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Michael Rivera
Voadika ny 21 Oktobra 2015 1:41 GMT
Havan'ireo mpianatra tsy hita tao Iguala. Saripika tao amin'ny Flickr an'i Mario Acosta, nampiasàna lisansa Creative Commons.
Misy feo maro mitsangana miady amin'ireo tabataban'ireo Meksikana mpanao politika sy ireo media mivoy ny fomba fijeriny ofisialy hoe miasa ho an'ny tombontsoam-bahoaka sy mendrika ny fitokisan'izy ireo ny fanjakana.
Matetika ireny feo manohitra ireny no misidina ambonin'ny hafa rehetra, saingy amin'ny fotoana sasany dia voasarontsaron'ireo tsy fifandeferana manempotra na avilan'ireo manana saina ratsy miroborobo ao anatinà tontolon'ny tsy refesi-mandidy sy fanaovana izay hintsin'ny loha fotsiny. Kanefa, mila henoina izy ireny.
Ndeha hojerentsika manokana ny feon'ireo Meksikana telo izay tsy manaiky ny hangina manoloana ny tsy rariny sy ny fanalàm-baraka. Tamin'ny fotoana sasany, nampitahorina ry zareo tsy haneho ny tsy hafaliany momba ny fifandirana mitam-piadiana misy ao amin'ny firenena, saingy notohizan-dry zareo nataony araka ny fanajàna ny lalàna sy tamin'ny fampiasàna ny zo fototry ny fahalalahana maneho hevitra ny tolona am-pilaminana fanaony.
Tsapan'i Alejandro Solalinde, pretra katolika nivadika ho mpikatroka mafàna fo ho an'ireo mpifindra monina — toy ireo vitsy ao Meksika — fa tsy maintsy atrehana toy ny toe-javatra iray, fa tsy toy ny olàna “tsy maintsy vahàna” ny resaka fifindràmonina. Tamin'ny 2007 izy no nanorina ny hotely Hermanos en el Camino (Mpirahalahy Miara-Dia) ao amin'ny tanànan'i Ixtepec, Oaxaca (atsimo-andrefan'i Meksika) mba hanome fanohanana noho ny maha-olona ho an'ireo mpivahiny avy ao amin'ny firenena sy manerana an'i Amerika Afovoany. Fiarandalamby mpitatitra entana, fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe The Beast no ahatongavan'ireny mpifindra monina ireny, raisiny eny an-dàlana ho any Etazonia, toerana antenain-dry zareo hahitàna ny tsaratsara kokoa.
Matetika mifanehatra amin'ireo vondrona mitam-piadiana sy ireo hafa mpanao heloka bevava ireo mpifindra monina mamakivaky ny sisintany atsimon'i Meksika ho any Etazonia, hatramin'ireo mpifindra monina ao anatiny mihevitra ny handeha ho any. Mahatonga azy ireo hiharan'ny fandrobàna, fanolànana sy sotasota ara-nofo, ankoatry ny heloka hafa.
Ny mpitandro filaminana ao Meksika, izay ara-potokevitra dia tokony hiaro azy ireny, no manao azy ireny ho lasibatry ny fakàna vola ankolaka, fanampàrana fahefana, ary faneriterena; manana fomba fiasa tsy miraharaha sy manamora izany ny Ivontoeram-pirenena momba ny Fifindràmonina sy ireo manampahefana mifandraika amin'izany.
Raha ireo voalaza etsy ambony ireo, miteny tsy tapaka i Solalinde mba hametrahana ilay olana ho ao anatin'ny fandaharam-potoana sy hikatsahana fikarakaràna mendrika ho an'ireo mandalo an'i Meksika hikatsaka fiainana tsara kokoa.
Tao anaty sombin-dahatsoratra ho an'ny gazetiboky Latino-Amerikàna Gatopardo, Emiliano Ruiz Parra no mamariparitra ny fanetrentena iainan'i Solalinde, hatramin'ny endrika hafa isehoan'ny kabariny izay manelingelina ny fahefan'ny Fiangonana Katôlika :
Mety hanefa ny ainy amin'ity izy manohitra ny indostrian'ny fikambanan-jiolahy ity, izay avy ao anatiny no ketrehana ny heloka bevava ataon'ny sehatra ambony amin'ny politika; ny fakàna ankeriny ireo mpifindra monina. Tsy ho lasa eveka velively izy noho izy miteny izay heveriny momba ny Fiangonana Reniny: hoe tsy mitoky amin'i Jesoa izy fa mitoky amin'ny fahefàna sy ny vola; manambany vehivavy, mitondra ny vehivavy sy ny laika ho toy ny zava-maloto, ary tsy izy irery no solontenan'i Kristy eto an-tany.
Fantatr'i Solalinde fa mitondra loza ny mifanamby amin'ireo manampahefana ao anaty firenena iray mbola miana-mandeha ny demaokrasiany, toa an'i Meksika. “Fantatro tsara fa ho avy ny fotoana iray hamonoan-dry zareo ahy, saingy tsy mbola nataony satria tsy te-handoa ny sandany ara-politika ry zareo,” hoy izy tao anaty tafatafa niarahany tamin'i Laura Cifuentes Weffer avy amin'ilay gazety tsy miankina ety anaty aterineto Efecto Cocuyo.
Mpanao gazety, mpanoratra ary poety — ary nirotsaka ho amin'ny fikatrohana toa an'i Solalinde koa — izay niala tamin'ny zava-panaony voalohany mba hitaky ny fampitsaharana ny herisetra, ny tsimatimanota ary ny tsy rariny ao Meksika. Manana antony hafa i Sicilia nahatonga azy ho lasa mpikatroka mafàna fo satria izy tenany mihitsy no nizaka ny vokatry ny fifandirana mitam-piadiana fony maty teo ampelatanan'ny fikambanan-jiolahy ny zanany lahy.
Nitondra ny teniny nitety ny lafy rehetra tao amin'ny fireneny i Sicilia, hatrany Etazonia, miaraka amin'ireo mpiaradia aminy. Amin'ny maha-mpitarika ny Hetsika Ho an'ny Fandriampahalemana miaraka amin'ny Rariny sy Fahamendrehana, nataony fantatra hatrany amin'izay birao farany ambony indrindra ny fitakiany, isan'izany ny fihaonana nahavaky fo nataony niaraka tamin'ny filoha Felipe Calderon, izay nangatahany valinteny sy hetsika mivaingana manoloana ny rivo-piainana feno herisetra, izay hatreto, mbola midongizina be ao Meksika.
Efa ho herintaona lasa izay, taorian'ny vono olona tao an-tanànan'i Iguala — izay horesahantsika atsy aoriana kely — niresaka hetsi-panoherana niparitaka be i Sicilia, na dia nanoro hevitra aza izy ny hitazonana toetsaina tia filaminana:
Que esto no se diluya, hay que subir el tono, no en la violencia, sino en la construccion. Hay que acompañar la protesta con propuesta.
Aoka tsy ho adino io, tsy maintsy akarina ny tsindry, tsy amin'ny fampiasàna herisetra fa amin'ny fanorenana. Tokony hiaraka aminà fanolorana sosokevitra ny hetsi-panoherana.
Havan'ireo niharam-boina tao Ayotzinapa
Niteny ihany koa ireo ray aman-dreny, iray tampo ary ireo hafa havan'ireo mpianatra nalaina an-keriny taorian'ny fifandonana nisian'ny fititra nataon'ny polisy tao an-toerana sy ny mpikambana avy amin'ny fikambana-jiolahy iray tao Iguala, Guerrero, tamin'ny Septambra 2014, nanohitra ny tsimatimanota izay mampahory ny firenena. Tokony hambara fa tsy ireo 43 mpianatra tao amin'ny Raul Isidro Burgos Sekoly Ambanivohitr'i Ayotzinapa irery ihany no olona namoy ny ainy tamin'izay andro izay. Nisy hafa niharan-doza ihany koa noho ilay herisetra, na teo aza ny hoe tsy anisan'ireo mpianatra mpikatroka mafàna fo ry zareo. Toa tsy nasian'ny tabataban'ny media resaka ny tranga nahazo azy ireny izay narahan'ny fanjavonan'ireo mpianatra 43.
Hetsi-panoherana teo amin'ilay Làlan'ny Fanavaozana, mampiavaka an'i Meksika. Sary avy amin'ny bilaogin'ny mpanoratra
Hatramin'ireny hetsika ireny, afaka arahana amin'ny tenifototra #AcciónGlobalPorAyotzinapa (Hetsika Erantany ho an'i Ayotzinapa), ireo diabe sy andro efa nanaovana hetsi-panoherana. Ny tanjon'izy ireny dia hitakiana ny fiverenan'ireo mpianatra (na efa nisy aza porofo nivaingana nilaza ny fahafatesan'ny sasany tamin'ireo mpianatra), raha olona an'arivony sasany indray amin'ireo manaraka ireto fianakavian'ny niharam-boina ireto no mikiaka mitaky ny rariny noho ny famonoana na ny fanjavonana an-terisetra nanjo ireo mpianatra teny ampela-tànan'ireo mpiasam-panjakana.
Indrisy anefa, nisy fotoana nivadika ho nahery setra ireo hetsi-panoherana, na teo aza ny fanambaràna avy amin'ireo mpitarika, nanitrikitrika ny hanaovana hetsika ampilaminana sy hanoherana ny herisetra.
iray amin'ireny feo ireny ny an'i Ezequiel Mora, rain'i Alexander Mora Venancio, izay tsy mbola voamarin'ireo manampahaizana avy amin'ny Anjerimanontolon'i Aostrisy nomena andraikitra handinika ireo sisan-taolana lazaina fa azy hita tao anaty fanariam-pako tao Cocula. Niteny tsy niolankolaka namely ny fitondrana misy amin'izao fotoana ao amin'ny firenena izy:
Izahay amin'ny maha tambanivohitra anay dia tsy afaka ny hanao hetsi-panoherana [ny fitondrana] satria vonoin-dry zareo izahay, ampijaliany; tsy governemanta manohana ny vahoakany ry zareo ireo. Fa governemanta mpanao kolikoly sy heloka bevava, mihoatra noho ny zavatra rehetra, satria ry zareo ireo no isan'ny namono ireo rehetra mpikatroka mafàna fo ara-tsosialy. Tsy ny hafa no namono azy ireny; ny governemantantsika ihany no namono azy ireny.
Nosoratana ho an'ny Blog Action Day ity lahatsoratra ity, hetsika iray izay iarahan'ny olona rehetra manerana ny tany manoratra mikasika olana iray. Ny lohahevitra ho an'ny 2015 dia hoe “Asandrato ny Feonao.”